Zambia: Heverin’Ireo Bilaogera Fa Ilay Filoham-Pirenena Nodimandry No Nametraka Ny Datim-Pifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Aogositra 2011 16:26 GMT
Ela ny ela, ny 28 Jolay 2011, ny Filoham-pirenena Zambiana, Rupiah Banda, dia nanambara ny datim-pifidianana ho ny 20 Septambra rehefa avy nanao sonia ny lalàna mandrava ny antenimiera.
Rehefa avy noravana tsy hisy intsony ny antenimiera ny 24 Jona, nanomboka niakatra isan'andro vaky ny kotaba avy amin'ny mpanohitra, sampan-draharaham-panjakana sy ny olom-pirenena, tsy nisy izay filoha nanambara daty akory. Nisy ny adihevitra tao amin'ny firenena, ny amin'ny tsy maintsy hisian'ny datim-pifidianana mitombina ho solon'ny fiankinana amin'ny haitraitra sy haingitraingitran'ny filoha am-perinasa, izay mahazo alàlana avy amin'ny Lalàna mifehy ny Fifidianana ho afaka manambara ny datim-pifidianana.
Filoha Zambiana, Rupiah Banda. Sary nalain'i Antonio Cruz/ABr . Creative Commons (CC BY-SA 2.5)
Nefa,ilay bilaogera Zambiana iray, Mazuba Mwiinga, dia mitsikera fa ny filoha nodimbiasan'i Banda, ilay Filoha nodimandry Levy Mwanawasa no nametraka tamin'ny fomba tsy mivantana ny datin'ny fifidianana.
Mazuba manoratra :
Toa sahala amin'ny filoha maranin-tsaina sy mpisolovava mahay ihany i Levy. Sa tsy mino izany ianao? Tamim-paharanitan-tsaina no nitenenany tamin'i ( Minisitry ny Tetibola teo aloha, Ng’andu) Magande hametra ny fotoana hoe rahoviana ny Tetibolam-Pirenena no tokony hatolotra ny antenimiera. Ary famolavolana fa minoa ahy ianareo; mandidy fa ny fifidianana ny ho ao amin'ny antenimiera dia tsy maintsy vitaina alohan'ny volana Oktobra foana ao anatin'ny taom-pifidianana iray.
Tsy tokon'ny ho eo an-tendanao fotsiny ihany ny fahagagana. Araka ny Lalàmpanorenan'i Zambia (fanovàna) Act No. 20 ny taona 2009, Andininy 117 (1) milaza fa, “Ny Ministera tompon'andraikitra amin'ny Tetibola no tsy maintsy manomana sy mametraka ao amin'ny Antenimieram-Pirenena, alohan'ny Zoma faharoa amin'ny volana Oktobra, mialoha ny fanombohan'ny taom-pandaniana manaraka, ny vinavinan'ny vola miditra sy ny fandanian'ny Governemanta ho an'ilay taom-pandaniana”, voafaritry ny rijanteny faha-2 ;
Midika tsotra izany fa hoe isan-taona, ny herinandro faharoa amin'ny Oktobra dia tsy maintsy mampahafantatra ny toe-bolany amin'ny taona manaraka ao amin'ny antenimieram-pirenena ny Governemanta
Manohy i Mazuba
Ny rijanteny faha-2 dia fepetra ankapobeny izay manome fialonkalofana ho an'ny governemanta vaovao mba ho tony sy vonona. Nefa ny rijanteny faha-3, ny andàlany 117 no ny hevi-dehibe ijoroan'ny fotoam-pifidianana. Mifehy ny fitsipik'ity lalao ity izany. Io dia milaza fa, “Ny Antenimeram-Pirenena dia tsy maintsy mandany ny tetibola alohan'ny faha iraika ambitelopolon'ny volana Desambra”, mifanaraka amin'ny rijanteny faha-2.
Tamin'ny toeran-kafa, ireo Zambiana mpampiasa aterineto dia nandray ilay daty tamin'ny fanehoan-kevitra mifamahofaho.
Manoratra ao amin'ny Lusaka Times [ny tranonkala dia tsy manana rohy mankamin'ny tsikera manokana], MMD Chief Bootlicker milaza hoe :
Raikitra ny lalao, Vitao any an-tranonareoany ny tafatafa rehetra ary andao hatrehana ny tena ady. Avelao hanomboka ny ady ho amin'ny marina sy ny hoavin'i Zambia. Efa vonona izahay ary ny milinay efa voahoso-menaka tsara dia efa vonona hirifatra.
Avelao tokoa ny ady hanomboka.
Miditra amin'ny ady amin'ny mpanohitra, milaza zedian Umusasa :
Ny mpanohitra no niantso izao, ary nomeny azy ireo izany, 2 volana latsaka izay.
Ny ankamaroany aza mbola tsy nanambara ny lisitry ny mpilatsaka ho mpikambana ao amin'ny antenimiera!!!!
Andao henoina indray ny fitarainan-dry zareo!!
Sady tsy manambara ny safidiny, nefa miandany mazava tsara amin'ny mpanohitra, miteny Teza Chirwa :
Tsy afaka mandroso isika, raha mandeha amin'ny lalà-mahazatra no sady miandrandra vokatra hafa. Ny bembas [foko Zambiana iray] miteny–”umwana ashenda atashiya nyina uku nayia bwaili” [izy, izay tsy manao fitetezan-tany betsaka dia mihevitra fa ny reniny no mpahandro tsara indrindra].
Niely taminà hanihany tsy mazava ny momba ny fandresen'ny PF an'ny filoha Michael Sata izay fantatra fa manana olana ara-pahasalamana ao amin'ny fo, milaza i POMPIDU :
Indrisy anefa fa hiodin-kavia na ho havanana, tsy maintsy ho tratry ny aretim-po Ing Sata. Raha toa ka mandresy izy dia harary fo noho ny zava-tsy mampino. raha toa ka resy izy dia harary fo satria ho fantany fa iny no vintana farany ho azy ary fiafaràn'ny nofinofiny. Vonona hanandrana ny vintantsika amina fifidianana ampahany ve isika. Mifidiana am-pahendrena. Na RB (Rupiah Banda) na HH (UPND filoha Hakainde Hichilema).
Tsy dia misy fahasamihafana loatra ireo fanamarihana ao amin'ny
mpandala ny ara-dalàna zambiana.[Zambian Watchdog]…
Manoratra ny mpandray anjara iray izay toa mpanohana ny MMD, i Muzo 4 rb [ny tranokala dia tsy manana rohy mankamin'ireo tsikera manokana] :
viva rb. izao indray izao no andeha hitarain'ny PF? azoko antoka fa ny niantsoana azy ho tsy mahalala na inona na inona. Avelao ry zareo hanome ny lisitr'ireo solombavam-bahoakany. Ireo dia toetran'ny pf tsy mba manana tetik'adin-dalao mandrakariva akory!!
Azo antoka tsara fa tonga ny fiafaran'i sata! ho adino tanteraka nony farany izy sy ireo lehilahiny! chweeechweeechweee.
Iray hafa toa mpanohana ny UPND, i KANYEMBO dia manoratra hoe :
Misaotra anao Andriamatoa Filoha saingy efa akaiky ny ora handehananao. Tonga ny Lehilahy Tanora HH miaraka amin'ny rà vaovao. VIVA HH 20HH.
Sata, izay ny antokony no faharoa lehibe indrindra tao amin'ilay parlemanta noravana, dia tsy hoe tsy ampy mpanohana akory. Manoratra i SHAMROCK :
PA PWATO LELO (amin'ny sambo, ny PF marika, ankehitriny) VIVA SATA
Mpiara-miasa iray, Rooney, miantso adihevitra ifanatrehana amin'ny fahitalavitra ho an'ireo mpirotsaka amin'ny fifidiana ho filoham-pirenena :
Tena fotoanany izao, tokony hfanakalozan'ny olona hevitra momba ny olana mahazo ny firenentsika. Ilaintsika ireo telo mpilatsaka ho fidiana telo dia i HH, SATA ary RB mba hifanatrika mivantana amin'ny Tv isika mba hahafahan'ny mpifidy misafidy izay ho filoha mety ho an'i zed. Aoka tsy hifanevateva ary ajanony ny kiana ara-piaviana ifanaovan'ny andaniny sy ny ankilany. Tsy hahazo anay mihitsy izay resaka fanamarihana ara-piaviana any. Aoka isika hahay handanjalanja.
Satria efa manomboka izao ny fanisàna mihemotra mankamin'ny fifidianana, miandry sy hahita ny lalao sisa izao, alohan'ny hahalalan'ny Zambiana hoe iza no handrombaka ny fitantanam-pahefana afaka fito herinandro.